Fifidianana ho filohan’ny CAF : vonona ny hilatsaka ho fidina ny filohan’ny FMF | NewsMada
Fifidianana ho filohan’ny CAF : vonona ny hilatsaka ho fidina ny filohan’ny FMF
Par Taratra sur 10/02/2017
60 taona izao ny CAF na ny Kaonfederasiona afrikanin’ny baolina kitra. Betsaka ny fanovana tokony hatao ao anivon’izany CAF izany, miainga avy amin’ny fifidianana filoha vaovao, hatao ny 16 marsa ho avy izao. Hilatsaka hofidina amin’izany toerana izany ny filohan’ny federasiona malagasy (FMF), i Ahmad.
Atoa Ahmad ho fidina ho filohan’ny CAF, araka ny fanazavana nomen’ny FMF. Raha jerena ny tantara eo anivon’ny CAF, filoha dimy ihany, hatramin’izay 60 taona nisiany izay, ny nitondra tao. Midika izany fa tsy nisy mihitsy ny fanavaozana. Federasiona 10 samy mpikambana ao amin’ny CAF, efa nanambara ny fanohanany ny filohan’ny FMF nandritra ny fivoriana nataon’ny Cosafa (tapany atsimon’i Afrika), ny volana desambra 2016. Ahitana vondron’ny federasion’ny tany mampiasa teny anglisy sy teny frantsay amin’ireo, manosika an’i Ahmad ho amin’izany toerana izany. Izy rahateo koa, efa nahazo tsodranon’ny filohan’ny Repoblika malagasy. Hatramin’izao, fantatra fa hifaninana amin’izany izy sy ny filoha am-perinasa ankehitriny.
Tetikasa efa narosony, tohanan’ireo manohana azy, ny fanovana ny fitantanana eo anivon’ny CAF, anisan’izany ny lalàna momba ny fifidianana ; fanaovana mangarahara ny tolotrasa rehetra ; hametraka manampahaizana hanao ny rafitra vaovao eo anivon’ity federasiona iombonan’i Afrika ity ; haverina hodinihina hasiam-panavaozana ny tolotrasa momba ny fanamboarana ny kianja rehetra, tokony hifanaraka amin’ny zava-misy aty an-toerana ary hovaina ihany koa ny endriky ny fifaninanana aty Afrika.
Homena fanampiana ny federasiona tsirairay
Ho fanarenana ny federasiona baolina kitra aty Afrika ihany, homena fanampiana isan-taona ny federasiona tsirairay. Hitety ny federasiona mpikambana ao aminy ny CAF, tokony ho hita taratra koa ny fiaraha-miasa eo aminy sy ny fanjakana ; ary ny fanjakana misy federasiona mpikambana, manana alalana hanara-maso ny federasiona ao aminy, saingy tsy mitsabaka kosa amin’ny asany.
Nasian’i Ahmad teny ihany koa ny momba ny mpilalao afrikanina, indrindra fa ny Malagasy, hiezaka ho matihanina fa tsy hijanona ho mpilalao tsotra fotsiny. Rehefa matihanina, mba hiditra amin’ireo ekipa fanta-daza any Eoropa. Tsy azo ekena intsony, hoy izy, ny mpanazatra manana licence B na C fa tokony hanao fiofanana hatrany am-potony. Betsaka ny firenena aty Afrika hotsidihin’ny filohan’ny FMF, mandritra ny fampielezan-kevitra ataony, misy ny tany arabo, tsy latsa-danja koa ny any amin’ny firenen-kafa. Efa manana mpanohana izy amin’izany mandritra ny diany rehetra sy ireo matihanina miaraka aminy.